Mini ကို USB မှတ် Flash ကို Disk ကိုစတိုင် 125KHz ID ကိုကတ် Reader ကို, USB မှ Flash ကို Disk ကိုစတိုင် 13.56MHz IC Card ကို Reader ကို, Mini USB Flash Disk Style ID Card Reader, USB Flash Disk Style IC Card Reader, USB Interface U Disk ID Card Reader, USB Interface U Disk IC Card Reader, USB Interface U Disk 125KHz Card Reader, USB Interface U Disk 13.56MHz Card Reader, USB Interface U Disk ISO14443A Card Reader
Mini ကို USB မှတ် Flash ကို Disk ကိုစတိုင် 125KHz ID ကိုကတ် Reader ကို, USB မှ Flash ကို Disk ကိုစတိုင် 13.56MHz IC Card ကို Reader ကို
LF / HF Reader ကို Mini ကို USB မှတ် Flash ကို Disk ကိုစတိုင် 125KHz ID ကိုကတ် Reader ကို, Mini USB Flash Disk Style ID Card Reader, USB မှ Flash ကို Disk ကိုစတိုင် 13.56MHz IC Card ကို Reader ကို, USB Flash Disk Style IC Card Reader, USB Interface U Disk IC Card Reader, USB Interface U Disk ID Card Reader
အလုပ်လုပ်အကြိမ်ရေ ( optional ကို ): အနိမ့်အကြိမ်ရေ 125KHz ( optional ကိုမြင့်မားတဲ့ကြိမ်နှုန်း 13.56MHz )
ပံ့ပိုးမှု Card ကို: TK4100, EM4100, EM4001, EM4102 ( IC type ကိုထောက်ခံမှု Mifare စံ S50, S70 ကဒ် )
အလုပ် mode ကို: သာဖတ်ပါ
အချိန် Read: < 100ဒေါ်
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ: USB port ကို
အလုပ်ဗို့: DC က 5V
operating စို: 20-85% RH အ
status ညွှန်းကိန်း:2အရောင် LED (ပါဝါကို LED “ပြာသော”, “စိမ်းလန်းသော” status ကိုညွှန်းကိန်း)
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်: Windows ကို 98, XP ကို, 2000, Windows ကို 7, LIUNX, အန်းဒရွိုက်
(မှတ်စု: iPhone ကိုထောကျပံ့ပေးမထားဘူး)
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား: 75မီလီမီတာ× 21mm × 7mm
YJ36-R60 Series Flash Disk Style Mini Reader isastable, practical, မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်, no drive. Made of ARM CPU, design of small, beautiful appearance, simple and convenient use, has powerful data processing ability, the advantages of the reading speed.
လိမ္မော်ရောင်နှင့် OEM ထုတ်ကုန်များဖောက်သည်ရဲ့ဝယ်လိုအားအရသိရသည်
အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, ဝင်ခွင့်လက်မှတ်, membership management, students and campus card, data collection, စသည်တို့ကို.
I am interested in your product Mini USB Flash Disk Style 125KHz ID Card Reader, USB မှ Flash ကို Disk ကိုစတိုင် 13.56MHz IC Card ကို Reader ကို
prev: ACR122U-A9 NFC ကို Reader ကို, Felica, Mifare ထောက်ခံမှု, ISO ကို 14443A / B,
နောက်တစ်ခု: Code ကို Format ကိုချိန်ညှိပြောင်းလဲမည်နှင့်အတူ ID ကို Reader ကို, Code ကို Format ကိုချိန်ညှိပြောင်းလဲမည်နှင့်အတူ IC Reader ကို